एलसीडी, एलइडी, क्यूएलइडी, एसएलइडि र ओएलइडी टिभिमा के फरक छ ? - लुम्बिनी सञ्चार लुम्बिनी सञ्चार
एलसीडी, एलइडी, क्यूएलइडी, एसएलइडि र ओएलइडी टिभिमा के फरक छ ?
प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७८, सोमबार १४:५८
काठमाडौं । यदि तपाईलाई एलसिडी, एलइडी, क्यूएलइडी, एसएलइडि र ओएलइडीको डिस्प्ले टाइपको किन्नको छनोट गर्न सक्नु भएन भने कुन किन्नु हुन्छ । तपाई यो मध्ये कुन खरिद गर्नु हुन्छ । यि मध्ये कुन डिस्प्ले भएको टिसभ सहि हुन्छ । टिभिको पिक्चरको गुणस्तर र त्यसको मुल्य डिस्प्ले अनुसार हुन्छ ।
१. एलसीडी डिस्प्ले
एलसीडीको पुरारुप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो । टिभको अगाडिपट्टी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्यानल लागेको हुन्छ । त्यसमा धेरै रङ्ग हुन्छ यसको मद्दतले टिभि रङगिन आउँछ । यो रङ्ग आँखासम्म पुर्याउन लागि उज्यालो वा अध्याँरोको जरुरत पर्दछ । जसको लागि डिस्प्लेको पछाडि नर्मल प्mलोरोसेट लाइटिङको काम आउँछ । जसलाई सिसिएफएल भनिन्छ जुन पुरै प्यानलको पछाडि लागेको हुन्छ । टिभि खोलेपछि यो सिसिएफएल चम्कन लाग्दछ र हामी टिभिमा भिडियो देखिन्छ । एलसिडीका डिस्प्ले मोटो हुन्छ । साथै, कालो रङ्गको तह पुरै कालो हुँदैन । यदि कुनै भिडियोको कुनै कुनामा अध्याँरो देखाउनको लागि त्यस क्षेत्रमा उज्यालो बन्द गर्न हुँदैन । त्यसकारण त्यहाँ हल्का खैरो देखिन्छ ।
२. एलइडी डिस्प्ले
टिभि किन्दा सबैभन्दा धेरै विकल्प एलइडि टिभिको पाउँछौं । एलइडि टिभि सस्तो र धेरै आकारमा पाइन्छ । एलइडी टिभिमा रङ्ग पनि राम्रो आउँछ र विभिन्न कोणबाट हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ । यसको ब्राइटनेस लेबल र आवाज पनि टिभिको मोडल अनुसार फरह फरक हुन्छ । तर एलइडी टिभिमा कन्ट्रास धेरै राम्रो हुँदैन । एलइडी टिभि टेक्निकल्लीको हिसाबले एलसीडीनै हो । यसको भित्र सीसीएफएलको ठाउँमा एलइडी लाइटको प्रयोग गरिन्छ । यो टिभिको पिक्सल हुन्छ ।
३. ओएलइडी डिस्प्ले
अहिलेको सबैभन्दा राम्रो डिस्प्ले टेक्नोलोजी ओएलइडी हो । ओएलइडीको मतलब अर्गानिक लाईट इमीटीङ डायओड हो । यसको डिस्प्लेमा हरेक पिक्सलको नजिक आप्mनै लाइछ हुन्छ । सँगै हरेक पिक्सल आप्mनो हिसाबले बन्द पनि हुन्छ । त्यसकारण ओएलइडी स्क्रीनमा गाढा कालो र राम्रो कन्ट्रास्ट पनि मिल्छ । यसमा एलसीडी र एलइडी टिभिको जस्तो ब्राइटनेस धेरै हुँदैन ।
४. क्यूएलइडी स्क्रीन
ओएलइडी धेरै महङ्गो हुन्छ । एलइडी भन्दा राम्रो हुन्छ भने महङ्गोमा ओएलइडी भन्दा सस्तो हुन्छ । यो फरक फरक ब्राण्डको टिभि फरक फरक फीचरमा आउँछ । यसले गर्दा यसको मुल्यसँगै यसको पिक्चरको गुणस्तर पनि फरक हुन्छ । क्यूएलइडीको मतलब हो क्वान्टम डट एलइडी हो ।
५. एसएलइडी स्क्रीन
एसएलइडी टेक्नोलोजी अहिलेको समय रीयलमीको एसएलइडीमा मात्रै टिभि हेर्न सकिन्छ । किनभने यस टेक्नोलोजीको पछाडि एसपीडी टेक्नोलोजीका चीफ साइन्टिस्टसँग रीयलमी छ । एसएलइडी टिभिमा आरजीबी लाइटलाई मारेर यसलाई सेफलाइटमा बदल्छ । रीयलमीका अनुसार एसएलइडी स्क्रीन निलो रङ्गलाई काटेर आँखाको नोक्सान हुनबाट बचाउँछ ।
अब कम्प्युटरमा पनि युट्युबबाट भिडियो डाउनलोड गर्न सकिने